DAAWO:-Madaxweyne Farmaajo oo raali gelin siiyey Soomaaliland - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka DAAWO:-Madaxweyne Farmaajo oo raali gelin siiyey Soomaaliland
DAAWO:-Madaxweyne Farmaajo oo raali gelin siiyey Soomaaliland
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo, oo Maanta hadal ka jeedinayay shirweynaha Garsoorka ayaa Soomaaliland raali gelin ka siiyey duqayntii dowladdii kacaanka ee Magaalooyinka Soomaaliland sida Magaalada Hargeysa.
Waxaa uu sheegay in wixii xlligaas dhacay aysan aheyn arrimo qabiil,hayeeshee ay ahaayeen arrimo loo soo maray nidaam dowladeed oo waqtigaas jiray,isaga oo arrimahas ka hadlayay ayaa waxaa uu yiri”
“Wixii Wuqooyi ka dhacay ma ahayn Koofur oo Wuqooyi ku duushay, wax qabiil ku saleysanna ma ahayn,waxay ahayd Systam dowli ah, anigoo Madaxweynihii Qaranka ah ayaan cudurdaarkaas sameeyo, idinkuna aad ila qaadataan”.
Hadalkan uu Maanta Madaxweyne Farmaajo ka sheegay shirweynaha Garsoorka ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Maalin ka hor uu Magaalada Addis Ababa uu kula kulmey Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Walow aan la shaacin waxyaabaha ay kulankaasi uga hadleen.
Radio Risaala- Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo " wixii Wuqooyi ka dhacay ma ahayn Koofur oo Wuqooyi ku duushay, wax qabiil ku saleysanna ma ahayn,waxay ahayd Systam dowli ah, anigoo Madaxweynihii Qaranka ah ayaan cudurdaarkaas sameeyo, idinkuna aad ila qaadataan".Hadalka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kuso aadaya xilli dhawaan uu Magaalada Adis Ababa ee dalka Itoobiya kula kulmay Madaxweynaha Somaliland Muusa Biixi.
Posted by Risaala Media Corporation on Thursday, 13 February 2020
Previous articleSOMA Observes World Radio Day and the seventh anniversary of its foundation
Next articleChelsea oo la wareegeysa Ziyech
Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho waxaa Maanta kasoo degtay diyaarad siday deeq dawo ah oo katimid Midowga Yurub,taas oo lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya. Munaasabad...